Kujikiswe ibhanoyi ngenxa yobengafuni ukuhlala esihlalweni | News24
Kujikiswe ibhanoyi ngenxa yobengafuni ukuhlala esihlalweni
Honolulu – Ibhanoyili lijikiswe labuyiselwa eHawaii ngenxa yokuthi umgibeli odabuka eSouth Korea walile ukuhlala esihlalweni, wahlala phansi ngoba efuna ukwenza i-yoga, kusho i-FBI.
Umshayeli webhanoyi le-United Airlines ebelisuka eHonolulu International Airport liya eNarita International Airport ulijikisile ngemuva kokuzwa uHyongtae Pae exabana nezisebenzi zasebhanoyini, edudulana nomkakhe.
UPae utshele i-FBI ukuthi ubengafuni ukuhlala esihlalweni ngesikhathi kudliwa, wahamba wayohlala emuva ukuze anze iyoga azindle kahle.
Funda nalolu daba: Kudutshulwe obezama ukugqekeza
Ubesecasuka ngesikhathi umkakhe nezisebenzi zasebhanoyini bemtshela ukuthi akabuyele esihlalweni sakhe.
Ngokwesimangalo, kuthiwa uphinde wasabisa ngokubulala abagibeli futhi ubelokhu ememeza ethi akekho uNkulunkulu.